Hahafoana ny fahafahana maneho hevitra ve ny naotin’ny polisy ao Indonezia miompana amin’ny tenim-pankahalana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Desambra 2015 4:48 GMT
Polisy Indoneziana. Sary tao amin'ny pejy Flickr-n'i Sbamueller. Lisansa CC.
Namoaka naoty vaovao mampifandray ny lahatenim-pankahalana amin'ny fehezan-dalàna mifehy ny heloka bevava ao amin'ny firenena ny polisy Indoneziana. Raha nilaza ny polisy fa ilaina ny misoroka ny fifandirana ara-piarahamonina, dia nosokajian'ireo mpikatroka ho fandrahonana ny fahalalaham-pitenenana izany.
Tamin'ny 8 Oktobra, nanasonia Naoty No. SE / 6 / X / 2015 mikasika ny fifehezana kabarim-pankahalana (ujaran kebencian) ny lehiben'ny polisy. Nofaritan'ny naoty tamin'ny fitanisana ireo fehezan-dalàna maromaro efa misy ao amin'ny lalàna misahana ny heloka bevava ny lahatenim-pankahalana sady manitatra ny sehatry ny [lalànan'ny] heloka bevava.
Tafiditra ao anatin'ny tenim-pankahalana ankehitriny ny fihetsika manevateva, manala baraka, miteny ratsy zavatra masina (penistaan), fihetsika mety manafintohina (perbuatan tidak menyenangkan), fihetsika feno fihantsiana, fandrisihana ary fampielezana vaovao diso. Tanisain'ny naoty ihany koa ny fomba ielezan'ny tenim-pankahalana: kabary fanentanana, sora-baventy, fampitam-baovao sosialy, famoriam-bahoaka, toritenim-pivavahana, haino aman-jery mipaka amin'ny vahoaka ankapobeny ary ny fampitambaovao elekt'rônika.
Nilaza ny polisy fa ny naoty dia nokasaina hitarihan-dalana ny fampiharana ny lalàna amin'ny fomba hifehezana ny tenim-pankahalana sy isorohana ny fihanaky ny herisetra, indrindra amin'ny ady ara-pivavahana. Indonezia no manana mponina be silamo indrindra mihoatra noho ny firenen-kafa eto amin'izao tontolo izao. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, dia notafihan'ny mpivavaka hiringiriny sy mahery fihetsika ny fiarahamonin'ny vitsy an'isa sy ny fiangonana kristianina sasantsasany.
Inspektera Jeneraly Anton Charliyan, filohan'ny sampan-draharahan'ny fifandraisana amin'ny vahoaka ao amin'ny polisy nasionaly, nanazava ny maha zava-dehibe ilay naoty :
Tsy zakanay ny mamela ireo fitaovan'ny tenolojia vaovao sy nomerika vaovao ireo ho ampiasaina amin'ny tsy mety sy hanaovana fihoaram-pampiasana azy. Tahaka ny afo ny lela. Aza miteniteny foana. Jereo amin'ny fampiasa teny sy fiteny mety ny kolontsainao, ary asehoy fa firenena tsara fomba isika.
Haingana tamin'ny fitsikerana ny naoty ho fepetra tsy tena ilaina mety hitarika any amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ireo mpikatroka, vondrona mpampita vaovao ary mpahay lalàna sasany.
Bagir Manan, filohan'ny Vaomieran'ny Gazety ao Indonezia, niteny tamin'ny gazety Jakarta Globe fa fiverenan-dalana mankany amin'ny fotoanan'ny fanjanahantany ny naoty raha heverina ho tenim-pankahalana ny fitsikerana ny manampahefana:
Manana ny ahiahiko manokana aho momba ilay naoty. Miteny ny olona indrindra io [hitandrina amin'ny] lelany rehefa hampiely fankahalana. Saingy milaza ihany koa iofa misy ny hetsika ara-dalàna amin'ny fampielezana fankahalana. Mety hampidi-doza izany.
Te-hiverina amin'izany fotoana izany tokoa ve isika? Karazana demôkrasia manao ahoana moa izany raha misy iray maneho ny heviny ary dia alefa any am-ponja izy?
LBH Pers, Ivontoerana iray mpanolotsaina amin'ny lalàna, nampitandrina fa mety hikendry feom-panoherana ara-drariny ny naoty. Misy tsonga tamin'ny fanambarana nataon-dry zareo navoakan'ny Hukum Online:
Mety ho tonga any amin'ny fisamborana tsy mety ny fampiharana ny lalàna eto, raha toa mety tsy ho ilay nanao azy no hosamborina, ary izay no mety hiteraka fifandirana. Tsara kokoa ny manasarana ny fanalam-baraka amin'ny tenim-pankahalana, mba tsy hihoatra amin'ny fahefana ananany ny polisy raha mitàna io fampitandremana hafahafa io.
Yerry Nikholas Borang avy amin'ny vondrona fampitam-baovao marolafy Engage Media ihany koa dia manahy fa manome alalana malalaka kokoa hoan'ny polisy ny naoty :
…manome fitaovam-piadiana matanjaka hoan'ny polisy io, mamela azy hanapa-kevitra amin'izay mety ho heverina ho tenim-pankahalana na tsia, ary mety hiteraka olana sy mampidi-doza.
Tian'ny minisitry ny lalàna sy ny zon'olombelona teo aloha, Amir Syamsuddin, ny polisy hanaisotra ilay naoty, fa mety hiteraka savorovoro io :
Mety hieritreritra ny olona fa mety hametra ny fahalalaham-panehoan-kevitra io. Mety heverina hifehezana ny fiaraha-monina ihany koa io ka iheverana azy ho mifanohitra amin'ny demôkrasia.
Tamin'ny matoandahatsoratra iray ny gazety Jakarta Post nanaiky ny lanjan'ilay naoty amin'ny famahana ny olan'ny fiharatsian'ny adi-hevitra an-tserasera saingy nanolo-kevitra hijery indray mandeha ny famaritana mivelatra amin'ny ataony hoe tenim-pankahalana :
Noho ny fahamaroan'ny raharahan'ompa sy fanaratsiana maro mampanontany tena ihany, ny fanesorana ireo sokajy ireo ao amin'ny naoty vaovao no mety hitarika bebe kokoa amin'ny fifantohana amin'ny tenim-pankahalana.
Irfan Abubakar, talen'ny Foibem-Pandalinana ny Fivavahana sy ny Kolontsaina ao amin'ny Oniversitem-Panjakana Islamika Syarif Hidayatullah ao Jakarta, dia nampivohitra fa tsy mampiditra ho heloka bevava ny zon'ny olompirenena hitsikera ireo manampahefana fanta-bahoaka ilay naoty.
Nandrisika ny polisy izy hampiverina ny fitokisam-bahoaka ho amin'ny toerany:
Manana anjara toerana lehibe ilay naoty amin'ny fanatsarana ny vondrom-pivavahan'olona vitsy an'isa izay tsy voahaja matetika loatra ny zony. Saingy ny herin'ilay naoty ho fanatsarana ny fitantanana ny fifandirana ara-pivavahana dia miankina amin'ny fanolorantenan'ny polisy hametraka azy tokoa araka ny kinasan'ny mpamolavola.
Amin'izay fotoana izay ihany koa ny polisy dia ho mafy asa amin'ny fisalasalana sy ny tsi-fifankahazoan-kevitra eo amin'ny fiaraha-monina noho ny fitovian'ny fielezan'ny tenim-pankahalana amin'ny endrika ampahibemason'ny tsikera rehetra. Tsy maintsy soritana fa tsy natao hampanginana ny fahalalaham-panehoankevitra na hanalefaka ny fanitsiana demôkratika ilay naoty. Fa na izany aza dia fitadidiana amin'ny polisy io hihetsika amin'ny tenim-pankahalana io mialoha ny ivadihany ho vono olona noho ny fankahalana.
Ny amin'ny hoe manabe ny ao aminy hiatrika ny tenim-pankahalana ao amin'ny fiaraha-monina dia ankatoavin'ny maro ho fandraisana andraikitra tsara fitontona. Na ny fampiharana ny naoty dia mety hitarika tokoa amin'ny fihoaram-pahefana dia ahiahy tsy maintsy vahan'ny governemanta. Ny ahiahy ny amin'ny mety hamilian'ny polisy ny iraka lazain'ny naoty ho amin'ny tombontsoany manokana dia mitaratra ny tsy fahazoan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny loatra ny.fampiharana ny lalàna.
Tsy dia manampy loatra ny governemanta ny mamoaka lalàna maro sy politikam-panaovan-dalàna teo alohaloha teo ahitana lalàna efa mipetraka mety hanimba zon'ny tsirairay.
12 ora izayHong Kong (Shina)